VINAN’NY FILOHA RAJOELINA : Mandeha ny asa fampandrosoana ao Atsinanana
Hita soritra ao Toamasina sy manerana ny Faritra Atsinanana fa miasa ny Fitondram-panjakana. 7 octobre 2021
Miasa manaraka ny herijikan’ny Fitondrana foibe ny ireo Ben’ny tanàna sy ny governora Atsinanana, Rafidison Richard Théodore. Mandeha sy mizotra ara-dalàna avokoa ireo tetikasan’ny Filoham-pirenena. Tontosan’ny Ben’ny tanàna ohatra ny fanarenana ireo fotodrafitrasa ao amin’ny renivohitra ara-toekarenan’ i Madagasikara ary efa manomboka miarindoha ny fanefana ny karaman’ny mpiasa.
Ampiharina ny ady amin’ny kolikoly sy ny tsy matimanota. Hofoanana ireo mpiasa matoatoa. Matotra rahateo ny fiaraha-miasa eo amin’ny tetikasa "Padeve" sy ny kaominina. Vokatry ny ezaka fampiasana ny fitaovana vaventy fampiasana amin’ny fanaovan-dalana eny anivon’ny distrika sy kaominina ambanivohitra dia mitontaly 13 ireo lalana vita beton. Efa azo aleha ihany koa ny mampitohy ny RN2 sy Manambato. Vokatr’ izany dia azo antoka ny fisokafan’ny fizahantany anatiny.
Mpiasa matoatoa miisa 500
Ho an’ny kaominina ambonivohitr’ i Toamasina manokana dia efa hanomboka
hiarindoha ny famerenana ny fatiantoka nandritra ny taona maro noho ny trosa napetrak’ ireo mpitantana teo aloha. Miarindoha ireo fotodrafitrasa simba efa an-taonany maro raha tsy hilaza afa-tsy ny lalana, ny fahataran’ny karama ary ireo mpiasa matoatoa efa ho 500 isa mahery tsy miasa fa mandray karama fotsiny izao. Manginy fotsiny ny fanaovan’ ireo teo aloha tantely afa-drakotra ny fananam-panjakana teo anivon’ny kaominina. Ny famarotana tsy nanaraka ny lamina ara-dalàna ireo faritra maitso sy tranon’ny kaominina. Tato anatin’ ny herintaona sy tapany nitantanan’ny Ben’ny tanàna Rakotonirina Nantenaina Herilala dia efa saika vita hatramin’ny 85 isan-jatony ireo lalana efa nisy teo aloha ka simba, foana tsy misy intsony ireo fako nivangongo ary afaka nahavita lalana vaovao ihany koa ny fitantanana teo anivon’ny kaominina.
Manomboka miditra amin’ny fanaraha-maso an’ ireo mpiasa matoatoa ny mpitantana ary efa manomboka fantatra soritra fa ireo talena sampan-draharaha sy lefitry Ben’ny tanàna sasantsasany ihany no mamorona anaran’ olona fa misy mpiasa atsy sy aroa mba hahazoan ’izy ireo vola. Vitsy an’ isa ny tena vatan’ olona mpiasa ka tsy manao ny asany, efa hita soritra ihany koa ny fisian’ny mpiasa any amin’ny seranan-tsambo mandray ny volan’ny kaominina. “Ireo rehetra ireo no anisan’ny antony manahirana eo amin’ny volan’ny kaominina ka ilàna fanadiovana”, hoy ny Ben’ny tanàna. Raha ho an’ny kaominina ambonivohitr’ i Toamasina manokana dia efa eo am-pikarakarana ny hanaovana biometrika ny karatry ny mpiasa mba hahafahana mitily ireo mpiasa matoatoa, izay miisa 500 hatreto ny isa vonjimaika efa hita soritra. Aorian’ny fahavitany, dia tombanana fa hilamina amin’ izay ny olan’ny karama ka amin’ izay vao heverina ho tena kaominina renivohitra ara-toekarena tokoa i Toamasina.
Hiditra amin’ny "Padeve " faharoa
Nifarana ny herinandro lasa teo ny fiaraha-miombon’ antoka tamin’ny "Padeve" ( Programme d’ Appui et du Développement des Villes d’ Equilibre), andiany voalohany izay nifantoka tamin’ny fampiofanana ny mpiasa sy ireo tompon’ andraikitra isan-tsokajiny teo anivon’ny kaominina ambonivohitr’ i Toamasina ary nofaranana tamin’ny fomba ofisialy ny fanolorana ireo fitaovana ara-informatika avy tamin’ny Fitondram-panjakana, izay hampiasaina amin’ny fandrafetana ny drafi-pandaminana ny tanàna, PUDi ( Plans d’ Urbanisme Directeur) sy Faritra isarahan’ny kaominina ambonivohitra sy kaominina hafa ambanivohitra manodidina azy. Raha iverenana dia tetikasa entin’ny Fitondram-panjakana hanaovana tosika fampandrosoana sy tolo-tanana amin’ ireo kaominina ambonivohitra renivohi-paritany enina miampy an’ Antsirabe voalohany ny tetikasa "Padeve" ka vatsian’ ny JICA sy AFD vola izany. Ity tetikasa ity ihany koa no hampisy fifandraisany teo amin’ny tetikasa efa vita sonian’ny Fitondram-panjakana tamin’ny taona 2017 ny amin’ny tetikasa "TATOM" (projet d"Elaboration de schéma directeur pour l’ Axe Economique- Antananarivo- Toamasina-Madagasikara) ka hanaovana an’ ilay lalana migodana hampitohy an’ i Toamasina sy Antananarivo.
Ho velona amin’ izay ny fizahan-tany
Hiaina sy hizotra amin’ izay ny lafiny fizahan-tany ao anatin’ny Faritra Atsinanana tsy ho ela. Raha ny hita tao Foulpointe aloha dia efa tonga maro ny mpizahatany anatiny. Nohamafisin’ny governoram-paritra Atsinanana, Rafidison Richard Théodore, fa efa azo ampiasaina ary kasaina ho vita ao anatin’ny 15 - 20 minitra ny lalana 13 kilometatra mampitohy ny RN2 amin’ i Manambato, noho ny fanomezan’ny Filoham-pirenena an’ ireo fitaovana vaventy fanamboaran-dalana, ka izao nahafahana nanome tombondahiny ny lafiny fizahan-tany izao.
Ity farany rahateo no anisan’ny fomba haingana hanarenana ny toekaren’ ny Faritra. Anisan’ izany ihany koa ny nanaovana ny tsenabe Fagnako ny 24-25-26 septambra teo tetsy anoloan’ny Lapan’ny tanàna, hanetsehana ny mpizahatany anatiny, raha ny nambaran’ny governora hatrany. Nohamafisin’ny Minisitry ny Fizahan-tany izany fa hisy ny tolo-tanana avy amin’ny minisitera entina hanampiana ireo mpikarakara tsenabe na foara, festival eto amin’ny Firenena. An-kilany mizotra ara-dalàna tsy misy tomika ny fampanantenan’ny Filoham-pirenena amin’ ireo fotodrafitrasa maro sosona ho an’ i Toamasina, raha tsy hilaza afa-tsy ny famerenana ny boulevard Ratsimilaho izay nopotehin’ny rivo-doza Honorine tamin’ny taona 1986, ny fanamboarana aro riaka mba hiarovana ny sisin-dranomasina. Efa hiditra amin’ny andiany faharoa amin’izao ny tetikasa Miami taorian’ny fandraisana ara-teknika azy nandritra ny fandalovan’ny Filoham-pirenena farany tao Toamasina, ny 20 Aogositra lasa teo. Amin’ izay tetikasa sy fotodrafitrasa izay hatrany dia efa an-jatony kilometatra ny famakian-dalana tamin’ny alalan’ny asa tagnamaro tao anatin’ny Faritra Atsinanana. Ireo rehetra ireo no hitarafana fa mihazakazaka amin’ny asa fampandrosoana manaraka hafainganam-pandehan’ny Fitondrana foibe ny ao amin’ny Faritra Atsinanana.